FAMPIANARANA KABARY | FI.MPI.MA. Frantsa
Tafatafa ambany tafotrano momba ny fampianarana kabary,
niarahana tamin’ny Talen’ny Fampianarana sy ny fikarohana
aty ivelan’ny Nosy, Andriamatoa RAKOTOMAVO Tafika
Miarahaba anao Tafika.
Tolorana ny arahaba vaventiventy ianareo, tompokolahy, rosoana ny akory voafantimpantina ianareo, tompokovavy.
Inona no antom-pisian’ny andraikitry ny Talen’ny Fampianarana sy ny fikarohana aty ivelan’ny Nosy?
Tsy takona afenina, fa amberivatry maniry amin’ny tany mena ny fampianarana kabary aty ivelan’ny Nosy, ka tsy maintsy maka volon-tany. Andraikitray, araka izany, ny mampitovy lenta ny fampianarana rehetra aty ivelany amin’izay atao any an-tanindrazana.
Ny vontoatin’ny fampianarana ?
Araka ny tanjon’ny FI.MPI.MA. : “Miaro sy manondrotra ny fomba amam-pitenenana malagasy amin’ny alalan’ny kabary”, ny fampianarana no ampinga hampahafantarana sy hampitiavana ny kabary ka hampianarana ireo mpianatra handrafitra sy hiantsa kabary noforoniny ho azy tenany na ho an’izay soloany tena, na an-kasoavana izany na an-karatsiana. Koa :
Mamorona, fa tsy mamerina,
Mamorona, fa tsy manimba,
Mamorona, fa tsy manova.
Ireo no tanjon’ny fampianarana !
Aiza avy no misy fampianarana ?
Ho an’ireo izay mbola tsy mahay mikabary dia tsy misy mafy tsy laitry ny zoto akory, ary tsy misy sarotra tsy azo resena. Tanterahina any amin’izay toerana rehetra misy sampana na rantsana FI.MPI.MA. eto Frantsa ny fampianarana kabary, amin’ny andro izay mahamety izany.
Raha ny eto amin’ny Faritany Frantsa dia ireto avy ny sampana FI.MPI.MA. nanomana Fampianarana nandritra ny taom-pianarana 2014-2015 : Paris, Orléans, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Rennes ary Tours. Ny andro zoma hariva, na ny sabotsy matetika no nanatanterahana ny fampianarana hatramin’izao.
Marihina fa na aiza na aiza misy maniry te hianatra kabary dia azo tanterahina ihany koa amin’ny alalan’ny fitaovam-piseraserana maoderina ny fampianarana amin’izao fotoana izao.
Koa tsy zanak’Ikalahafa ny Malagasy aty ivelan’ny Nosy, raha ny momba ny fampianarana kabary no asian-teny ; tsy akofa isika, sanatria, fa tena vary, tsy lamokany, fa zanany. Koa tsy tokony hangetaheta eny ambony lakana isika, na ho noana eo am-pototry ny sompitra, fa raha ny fampianarana kabary iandraiketan’ny FI.MPI.MA. Faritany Frantsa dia tongotra mby an-dakana ka tsy miverina intsony.
Ny Takalo, inona no atao hoe Takalo ?
Ny hevitry ny maro mahataka-davitra, fa ny hevitry ny vitsy mandraraka ny an-tanana. Ny taona manaraka ny taom-pianarana no hanatanterahana ny Takalo any amin’ireo toeram-pianarana kabarin’ ny FI.MPI.MA. :
manalama vava mandritra ny Takalo ireo izay mbola votsa na miahotra am-pitenenana ;
mifanakalo fahalalana ihany koa ireo mpikambana, satria tsy misy manana ny ampy, ka tsara ny mifanampy.
Tsy fanambadiam-boalavo rahateo ny kabary ato amin’ny FI.MPI.MA. ka samy hikepoka izay azony, fa toy ny tokantranon-dandy ny fianarana kabary, ka ao anatiny ireo mpikambana no manatevina.
Misy saram-pianarana ve sa maimaim-poana ?
Ny rano tsy miriana foana, fa ao vato ; ny setroka tsy midona-poana, fa ao afo ; ary ny zavatra tsy misehoseho foana, fa ao antony. Misy sarany tokoa ny fampianarana ho enti-miatrika :
ny hofan-trano (anaovana ny fampianarana, ny fanadinana na ny lanonana isan-karazany;
ny saran-dalana hanafarana ireo mpampianatra na mpanadina mandritra ny fanadinana) ;
ny fanaovana dika mitovy ireo takelaka itahirizana ny lesona ;
ny hoenti-manana (ny fampianarana, ny lanonana isan-karazany)…
Ny saram-pianarana dia mitsinjara toy izao : 75 euros isan-taona, ho an’ny rehetra, ary 25 euros isan-taona ho an’ny mpianatra, sy ny tsy an’asa.
Ahoana ny momba ny mari-pahaizana, ny fisalorana lamba ?
Ireo mpianatra nanaraka ny fampianarana hatramin’ny farany, niatrika fanadinana ary afaka dia toloran’ny FI.MPI.MA. mari-pahaizana.
Ireo nanaraka ny fianarana hatramin’ny farany, nefa tsy afaka kosa, na tsy nanala fanadinana, dia tolorana ny mari-pitozoana
Salorana ny lamba FI.MPI.MA ireo mpikambana, herintaona aorian’ny taona voalohany nianarana, raha afaka manaporofo ny ezaka sy ny asan-kabary nataony mandritra io fotoana io.
Misy hafatra farany tianao hampitaina amin’ny mpiserasera ve ?
Dia efa latsaka ilalana ny fampianarana kabary eto amin’ny Faritany Frantsa ; ny efa nokasaina tsy azo avela, koa manainga sy manentana ireo izay mankamamy ny fomba sy ny teny malagasy hirotsaka hianatra sy hanatevin-daharana ireo izay efa manandratra avo ny kabary aty ivelan’ny Nosy.
Misaotra betsaka anao ,Tafika, ary manao veloma sy mirary soa anao izahay.
Veloma, mandrapihaona, amin’ny manaraka indray.